China FK-CT20 Scientific detector detector factory na-emepụta | Chuanyunjie
1. Sistemụ nrụọrụ: gam akporo sistemụ, isi njikwa ga-eji multi-isi processor, CPU ugboro ≥ 1.8GHz, nnukwu ikike ebe nchekwa, ngwa ngwa ọrụ ọsọ, ike kwụsie ike, ọ dịghị rapaara onu. Na USB sọrọ interface, bulite data nwere ike ebupụ ngwa ngwa.
2. Ngwá ahụ nakweere 7.0-anụ ọhịa nnukwu ihuenyo China agwa backlight ngosi, nwere ike ịchekwa ma bipụta nsonaazụ nnwale, ma nwee ọrụ nke ajụjụ data na mbipụta akụkọ ihe mere eme.
3. Ọ dịghị mkpa ịme oghere na ọkọlọtọ maka ule. E jiri ya tụnyere ngwá ndị ọzọ, usoro ọrụ, oge ọrụ na oriri reagent belatara ọkara. A na-agụpụta ihe atụ ahụ iji wepu njehie sitere na usoro ọkọlọtọ na-adịghị ọcha ma hụ na nyocha nke nsonaazụ ziri ezi.
4. 12 ọwa rotary colorimetric cell (na-abụghị ihe siri ike modul), nke nwere ike ịchọpụta 12 n'omume n'otu oge. Nlereanya ọ bụla nwere ike ịhọrọ ihe nchọpụta dị iche iche, ma gbanwee na akpaghị aka. Ọ nwere ọrụ nke ichetara ọwa ọ bụla iji mezue nchọpụta.
5. Ngwá ọrụ ahụ nwere ọrụ nchebe ya, nke nwere ike ịtọ aha njirimara na paswọọdụ; Ejiri mkpọchi mkpisiaka maka nbanye mkpịsị aka, gbochie ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ iji lelee data nnwale.
6. Ewubere na ihe ubi Atlas: dika foto nke nri erimeri nke akuku obula, tunyere akwukwo ahihia, ma choputa otutu na erughi ya.
7. Nbipụta data: onye na-ebi akwụkwọ ọkụ na-ekpo ọkụ nwere ike ibipụta ihe nchọpụta, nkeji nchọpụta, ndị ọrụ nchọpụta, oge nchọpụta, akara ọwa, absorbance, ọdịnaya (mg / kg), koodu ụzọ abụọ na ozi ndị ọzọ.
8. Wuru na onye nchoputa di elu iji nweta uzo ziri ezi nke uzo obula ;;
9. Ejiri ngwongwo uzo anọ nke nchapu oku (uhie, acha anụnụ anụnụ, green na oroma) mee ihe a. Ogologo oge nke ọkụ ọkụ na-akwụsi ike, ndụ ọrụ ahụ ruru 100000 awa, nrụpụta ahụ dị mma, na izi ezi dị elu.
10. akụrụngwa nwere oriọna ngosi ọkụ, nke na-egosiputa uru voltage dị ugbu a na ezigbo oge iji hụ na ọnọdụ volta nke arụmọrụ na-arụ ọrụ, ma nwee ọrụ nke nchekwa ọkụ. Bụrụ na nke mberede ike ọdịda, data nwere ike ịchekwa na-akpaghị aka iji gbochie data ọnwụ
11. Mmepụta nke oge na mkpebi siri ike nke ngwa ngwa N, P, K na nri ndị ọzọ dị na ala.
12. Nchọpụta ọsọ: n’okpuru ọkwa amamịghe, ọ na-ewe ihe dị ka nkeji iri abụọ iji chọpụta ala ammonium nitrogen, phosphorus na potassium (tinyere ntinye ala na nkwadebe kemịkalụ), ihe dịka nkeji 50 iji chọpụta fatịlaịza nitrogen, phosphorus na potassium, na ihe dị ka nkeji iri abụọ. ịchọpụta otu akara mmewere.
1. Onyinye ike: AC 220 ± 22V DC 12V + 5V (nnukwu lithium batrị n'ime akụrụngwa)
2. Ike: ≤ 5W
3. Ogo na mkpebi: 0.001-9999
4. Ntughari mmegharia: ≤ 0.04% (0,0004, potassium dichromate solution)
5. Ngwunye ngwa ngwa: ịkpafu na-erughị 0.3% (0.003, ntụgharị ntụgharị) n'otu awa. Mgbe akụrụngwa malitere ma kpoo ọkụ maka nkeji 5, akara ngosi agaghị agagharị n'ime nkeji 30 (ntụgharị ntụgharị ọkụ); N'ime otu awa, ịpị dijitalụ agaghị agafe 0.3% (ntụgharị ntụgharị) na 0.001 (mmịpụta absorbance); 5% (0. 005, ntụgharị ntụgharị) n'ime awa abụọ.
6. Linear error: ≤ 0.2% (0.002, copper sulfate nchọpụta)
Nke gara aga: FK-CT10 Onye nchoputa ihe omimi nke ala
Osote: Osisi chlorophyll mita
Nnyocha Nri Ala
Ala nyochara ala na-edozi ahụ
Ala nyochara ihe na-edozi ahụ
Ala na-edozi ahụ
Nlekọta Uri na-edozi ahụ
Njirimara ngwa ngwa Nnukwu uche - 10-15-10-18 mol / L Ọsọ dị oke - usoro ọdịnala ọdịnala karịrị awa 18-24, ebe ATP na-ewe ihe karịrị sekọnd iri Feasibility - enwere mmekọrịta doro anya n'etiti ọnụọgụ nke microorganisms na ọdịnaya ATP na microorganisms. Site na ịchọpụta ọdịnaya ATP, ọnụọgụ nke microorganisms na mmeghachi omume nwere ike nweta n'ụzọ na-enweghị isi Operability - the tr ...
Njirimara arụmọrụ 1) Njikọ nke ndị ọbịa na nyocha na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mfe. 2) Iji teknụzụ microcomputer, LCD nnukwu ngosipụta kristal mmiri. 3) Batrị arụmọrụ dị elu, enweghị ike ọkọnọ mpụga, ngosi ngosi volta dị ala, kwesịrị ekwesị maka mmụba ubi. 4) Nnukwu agụba ebe nwere ike tụrụ na otu oge (1000 * 155mm2) 5) Ọ nwere ike na-echekwa 250 tent nke data (akwukwo ebe, akwukwo ogologo, akwukwo obosara). ...